Ama-Revenue Air Bags - Izwe lase-China Reverse Air Bags, Factory -Sffiltech
1. Imikhiqizo eyinhloko: imikhakha emibili ye-alkaline ephakathi ne-alkaline yamahhala yefilakisi lokutholwa kwendwangu (isikhwama).
Endlini yesikhwama somoya esibuyela emuva, umoya ongcolile ugeleza usuka ngaphakathi nangaphandle, ukuze uthuli luqoqe ngaphakathi kwesikhwama sokuhlunga. Izikhwama zokuhlunga zibalulekile, zivulekile ngezansi futhi zixhunywe eshidini. Asekelwa kusuka phezulu ngesistimu yokumiswa kwentwasahlobo noma i-J-bolt. Ukugeleza kwegesi kubuyiselwa emuva ukuze kuqale ukuhlanzwa kwesikhwama sokuhlunga. Izindandatho zokuwa ngokuwa zithunyelwa ngaphandle kwezikhwama ngezikhala ezi-3 kuya kwezi-4 ukuvimbela ukuwa ngokuphelele kwezikhwama ngesikhathi sokuhlanzwa komoya okubuyela emuva. Izikhwama zokuhlunga zihlanzwa igceke linye ngasikhathi sinye kwimodi ye-off-line.
Ukuvama Kwe-Reflect Air Filter Tension Ejwayelekile
Ama-50 lbs. (I-Polyester)
75 ama-lbs. (I-Fibglass)
Buyisa isikhwama sokuhlunga se-Fiberglass
Indwangu yokuhlunga yeglasi yenziwa ngentambo ye-fiberglass, ngokuphathwa okukhethekile njenge-graphite, i-silicon, ukucwilisa kwe-ptfe, ngokumelene nokwelashwa kwe-acid nokunye ukwelashwa ngamakhemikhali. iyindwangu yokuhlunga ephezulu yokushisa ephakeme izikhwama zokuhlunga ze-fiberglass zisetshenziswa kabanzi endaweni enezinto zokuhlanza uthuli lwezimboni, indlu yesikhwama, ukungcoliswa komoya kanye nokuvuselelwa kabusha kothuli okubalulekile, njll.
Isikhwama sokuhlunga se-fiberglass evuselela imvamisa sisebenzisa indwangu yefayela le-450gsm kuya ku-550gsm fiberglass.
1. ukumelana okuhle kokushisa, okulungele ukusetshenziswa kwesikhathi eside ngaphansi kwezinga lokushisa ngaphansi kwe-280 deg.
2. ukusebenza kahle kokhonkolo othulini, ukuhlangana kwamandla amancane ukuze kususwe umlotha.
3.Usayizi wezikhwama zokuhlunga ze-fiberglass uzinze kakhudlwana, akukho shrinkage yefayibha ngaphansi kwezinga lokushisa eliphakeme.
4. ukumelana okuhle kwamakhemikhali: ngaphandle kwe-hydroelectric acid acid acid eqinile, ne-alkali eqinile, izinzile kakhulu kunenye i-filter medium.
5. Indwangu yokuhlunga ye-fiberglass ayithathi umswakama kanye nomswakama
6. Ukuhlunga okusebenzayo kwesikhwama sokuhlunga se-fiberglass kungadlula i-99.5% njll bese ubamba uthuli olungezansi kwe-PM2.5, singathola ukukhishwa komoya oyi-20mg.
Amandla angu-7 lendwangu yokuhlunga ye-fiberglass, ingadlula i-3000N / 5 * 20cm
Izingxenye ezihambisanayo zimi ngokulandelayo:
Izihlungi zesikhwama zokuhlunga
Hlunga isikhwama se-venturi
Ihluzo lesikhwama sokuhlunga
Isihlungi sesikhwama sokuhlunga
Isikhwama sokuhlunga sePolyester sisetshenziswa kakhulu emayini, e-limestone, kusimende, kwensimbi nasezimboni zensimbi, ukulethwa kwe-alumina, i-elekthronikhi aluminium, ukukhiqizwa kwensimbi okungahambisani, ukucubungula izinkuni, ukucubungula ukudla kanye nomkhakha wezemithi.